रोमी २:११-१५ – Word of Truth, Nepal
“पक्षपात” — अक्षरश: “(व्यक्तिको) अनुहारलाई ग्रहण गर्नु”। परमेश्वरले कुनै पनि व्यक्तिसित उसको “अनुहार” को आधारमा व्यवहार गर्नुहुन्न (बाहिरी भागलाई ध्यान दिनु जस्तै: राष्ट्रियता, वंश, छालाको रङ्ग, धन इत्यादी)। परमेश्वरले बाहिरी सतहमा भन्दा भित्र गहिराइमा हेर्नुहुन्छ। ग्रीक चलनमा रहेकी ‘इन्साफकी देवी’ को अगाडि न्यायको निम्ति आएको व्यक्तिलाई नदेखून् भनेर त्यस इन्साफकी देवीको आँखामा पट्टी बाँधिएको हुन्थ्यो।
१२ पदको पहिलो भाग अनुसार, बिना व्यवस्था पाप गरेका अन्यजाति (सृष्टिपूजक व्यक्ति)हरूलाई के हुनेछ? (“के सृष्टिपूजकहरू हराएका छन्?” भन्ने प्रश्नमा यसले प्रकाश पार्दछ।) १२ पदको अघिल्लो भागअनुसार, व्यवस्था पाएको हुँदा-हुँदै पनि पाप गरेका यहूदीहरूलाई के हुनेछ? “तर जतिले… पाप गरेका छन्” भन्ने वाक्यशैलीलाई ध्यान दिनुहोस्। कतिजनाले पाप गरेका छन् (रोमी ३:२३ र ३:९ पढ्नुहोस्)?
अन्यजातिहरूसँग परमेश्वरको लिखित व्यवस्था छैन। तिनीहरूसँग मोशाको व्यवस्था छैन। तर यी पदहरू अनुसार तिनीहरूसँग परमेश्वरको व्यवस्था तिनीहरूभित्रै छ, “आफ्नै हृदयहरूमा… लेखिएको देखाउँछन्”। तिनीहरूले १० आज्ञाका प्रतिलिपी कहिल्यै नदेखे तापनि हत्या गर्नु, चोरी गर्नु, झूट बोल्नु आदि गलत हो भन्ने कुरा तिनीहरूलाई थाहा छ। अनि जब तिनीहरूले यस्ता कामहरू गर्दछन् तब तिनीहरूको विवेकले नै उनीहरूलाई दोषी ठहराउँदछ। यहाँ दुई उदाहरणहरू छन्: १) प्रेरित २८:३-४। यी आदिवासीहरूले १० आज्ञाहरू कहिल्यै पनि देखेका थिएनन् तर हत्या गर्नु गलत हो र त्यसो गर्ने व्यक्ति मृत्यु दण्ड पाउन योग्य हुन्छ भन्ने कुरा तिनीहरूलाई थाहै थियो! २) यी अन्यजाति राजाले १० आज्ञाहरू कहिल्यै पनि देखेका थिएनन् तरैपनि व्यभिचार गर्नु गलत हो भन्ने तिनलाई थाहा थियो।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 10:24:242020-04-28 14:36:11रोमी २:११-१५
रोमी २:७-१० रोमी २:१६-२९